Senator Faroole Oo Ka Hadlay Dagaalka Gaalkacyo – Goobjoog News
Senator C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka hadlay dagaallada u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Galmudug, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Waxa uu sheegay Faroole in ay aad uga xunyihiin dagaallada Gaalkacyo, isaga oo sheegay in shacabka Mudug aysan u baahneen dagaallo sokeeye iyo wax lamid ah, wuxuuna ku baaqey in dhanka nabadda la eego.
Faroole ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dagaallo ay ka dhacaan dalka iyadoo doorashooyinka lagu guda jiro.
“Lagama aamusi karo dadka dhibaatada ku dhacday ee aan waxbo galabsan, caruurta barakacday, haweenka ku umulaya meelaha bannaanka ah, ardadii oo iskuullada ay ka baaqatey, iyadoo aan la garaneyn cidda dagaalkaasi wadda iyadoo heshiis la ogyahay in lagaarey, marka salaanta nabadeed ma ahayn mid laabta jirtey” ayuu yiri Faroole.
Faroole ayaa dhanka kale ugu baaqey madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu tago magaalada Gaalkacyo si loo xalliyo dagaallada Gaalkacyo.
Dagaal u dhaxeeyey ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana dagaalladaasi ay sababeen khasaare kala duwan oo dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed isugu jirta.
Ykyhov jghenb printable cialis coupon cialis coupon walgreens
Tyjqve fewpzg cvs pharmacy Beygd
Czmygg qreibs real viagra without prescription
discount viagra buy viagra virginia
trial cialis sildenafil prescription cost
https://tadaldos.com/ generic cialis cheap
https://okpharmp.com/ generic substitute for cialis
Jokjtg mnfvfh www canadian pharmacy Nxrps
Zxnmxe tpmczr discount brand cialis Fbyaw
Ixgtyf vieozh trimox online Zjxru
Mtyjcd egcukd sildenafil viagra Qkhnb
Rmhjye epayzx discount cialis online Fyooo
canada drugs pharmacy in canada family pharmacy
Fayoxr tbbgnq play for real online casino games Ulnbh
indian pharmacy online best ed medication pharmacy drugstore online
Zovmmr ncgyiz where can i purchase cialis Qqkrs
india pharmacy canadian online pharmacy п»їviagra online canadian pharmacy
cheap generic viagra viagra 6 free samples viagra delivery t...
cialis comparison of 10 mg cialis price paypal cialis [url=h...
cialis online no prescription australia buy cialis no prescr...
buy viagra on discover card viagra buy viagra no prescriptio...
viagra buy reviews 100mg viagra on line photos of real viagr...